China Light blue blue B113 / Opaque ukukhanya blue B102 / Ford blue B118 / Ocean blue B105 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Ifowuni: 86-0576-83172982 2983
I-Ford eluhlaza pvb
I-pvb eluhlaza okwesibhakabhaka
I-pvb emdaka ephakathi
Ubisi olumhlophe lwe-pvb
I-pvb yolwandle eluhlaza okwesibhakabhaka
I-Opaque ukukhanya kweblue pvb
Umbala omdaka okhanyayo T101
I-Opaque emhlophe pvb
I-pvb ebomvu ebomvu
I-pvb emhlophe eguqukayo
Luhlaza mnyama kwi-pvb eluhlaza eluhlaza
Luhlaza okwesibhakabhaka kwi-pvb ecacileyo
Luhlaza kwi-pvb ecacileyo
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwi-pvb eluhlaza okwesibhakabhaka
Ubungqina bobushushu bePVB
I-pvb ye-lonoplast yeN-UV
Luhlaza okwesibhakabhaka B113 / Opaque ukukhanya kweblue B102 / Ford blue B118 / Ocean blue B105
Umbala weBaizan umbala we-pvb yeglasi yoyilo
Imveliso> 12000t ngonyaka
Umbala pvb MOQ> 5000 sq.m.
Ixesha lokuhlawula: TT LC DP
Inkonzo yasemva kwentengiso: Siza kulandela iziphumo zovavanyo zabathengi, kwaye ukuba kukho ingxaki, siza kuyikhangela kwindawo leyo.
Ukucoca iglasi Ukucoca iglasi kunye nokusika kwefilimu yePVB
● Sika ngokufanelekileyo iglasi ngobukhulu obuchanekileyo
● Jonga umphezulu weglasi kwaye ususe igrisi kunye nothuli, coca iglasi ngamanzi etephu.
● Pula iglasi ngamanzi adinina okanye ngamanzi athambileyo. Umgangatho wamanzi ＜ 30μS, ubunzima bamanzi, i-10 PPM, ubushushu ngama-40-60 ～.
● Yomise iglasi kwaye uyigcine kude nongcoliseko.
● Ifilimu yePVB kufuneka isikwe ngobukhulu obukhulu kune-2 2 5mm ngaphezulu kuneglasi.
● Igumbi Lamination --- Iqondo lobushushu kwigumbi lamination kufuneka libe yi-20 ～ 25 ℃, ukufuma kufanele kube ngama-23% ± 2%, ubungqina bemivuthuluka, ukugcina ucoceko loomatshini, abasebenzi kufuneka bagcine iyunifomu ecocekileyo, umnqwazi kunye ne-grove ukukhusela ifilimu ye-PVB kuthuli, Ungcolisa neenwele.
● Iimeko yokugquma:
a) Ubushushu bomphezulu weglasi-- 20 ～ 30 ℃, awona aphezulu akufuneki abe ngaphezulu kwama-40 ℃.
b) Ubushushu befilimu ye-PVB-- 20 ～ 25 ℃.
c) Jonga kwakhona ifilimu yePVB kunye negilasi icocekile kwaye ubungakanani beglasi buhambelana ngokufanelekileyo nobungakanani befilimu yePVB.
Umshini obandayo kunye nomshini oshushu
a) Umshini obandayo-- Isidanga sokucinezelwa kufuneka ubengu-580, 680mmHg, ubushushu kuma-20-25 ～, uxinzelelo ngo -0.095 ～ -0.1MPa. Kuthatha malunga nemizuzu engama-20 ukuPompa ngokuqhubekayo okuPholileyo, ngelixa imizuzu engama-30 kukuPompa okuPholileyo okungapheliyo.
b) Umshini oshushu --- Ubushushu beglasi kufuneka bube kwi-100, 120 ℃, kuthatha imizuzu engama-30 ukuya kwengama-45, uxinzelelo kufuneka lube -0.095 .0 -0.1MPa. Iglasi ingathathwa xa ubushushu buyancipha buye kuma-60- 80 ℃.
● Ukuqengqeleka kwe Exhaust:
a) Ithemostriyitha yokuqala - → Ubushushu bomphezulu obuGlasi obuBushushu buyi-30 ℃ 40 ℃ - → I-roller yokuqala, uxinzelelo yi-5 ～ 8Mpa, umgama wokuhamba kufuneka ubengu-1-2mm ngaphantsi kobunzima beglasi obuLaminisiweyo- → Ithemostathi yesibini - → iglasi elaminethiweyo lobushushu kumphezulu 65 is 80 ℃, uxinzelelo 5 ～ 8Mpa, umgama mqengqeleki yi 2-3mm ngaphantsi kwe elaminethiweyo yeglasi ubukhulu.
b) Gcina ubushushu be thermostat ngomsebenzi oqhubekayo.
Ubushushu kunye noxinzelelo olukhulayo ngesantya esisezantsi ngexesha lenkqubo yonke. Inkqubo engezantsi yesalathiso:
Nyusa ubushushu noxinzelelo- → Ubushushu bonyuke bayi-60 ℃, Uxinzelelo ukuya ku-0.4MPa- → Uxinzelelo ukuya ku-0.8MPa, ubushushu ukuya kuma-90 ℃ - → Uxinzelelo ukuya ku-1.0MPa ,, Ubushushu ku-135-140 ℃ - → Ukunyuka kwamaqondo obushushu ukuya ku-1.05 ～ 1.28 MPa - → Gcina ubushushu kwimizuzu engama-30 ukuya kuma-60 (kuxhomekeke kubukhulu beglasi kunye nobungakanani) - → Gcina uxinzelelo, unciphise ngokukhululekileyo iqondo lobushushu ukuya kwi-90 ℃ - → Ubushushu buye kwi-45 ～ 55 ℃, khulula umoya
Iimeko zokusetyenziswa kwabaThengi
Okulandelayo: I-N-UV PVB
Uyilo lwefilimu yePvb
Luhlaza kwi-C102 ecacileyo
Ubungqina bobushushu bepvb yefilimu
Mthubi Y101 / Opaque mthubi Y102
Ukukhanya okumhlophe M104 / Milky emhlophe M102 / Op ...
Yasekwa ngonyaka ka-1999, ngophuhliso lweminyaka emide, iBaizan yasungula inkcubeko eyodwa ebandakanya inkqubo yolawulo engqongqo, ubuvulindlela obuqhubekayo, igama elihlala lihleli, ukoneliseka kwabathengi kunye nomgaqo-nkqubo wokuphumelela. Okwangoku, sinokunyaniseka…
Inombolo ye50 Xiyuan Road, Keshan West Industrial Zone, Tiantai ， Zhejiang ， China